December 18, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on मासुको भाउ बढाउन ३० लाख चल्ला मारियो !
काठमाडौं । मासुको मुल्य बढाउन नेपाल ह्याचरी उद्योग संघले कुखुराका ३० लाख जिउँदो चल्ला मारेको रहस्य खुलेको छ ।ब्रोइलर कुखुरा र कोइलरको मासुको मूल्य बढाउने उदेश्य लिएर संघले चल्ला मा’रेको खुलेको हो । संघले निर्मम तरिकाले खाल्डोमा पुरिएको ती चल्लाको मूल...
November 17, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on धरहराको पहिलो तला बन्यो, अब पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा एक-एक तला थपिने !
काठमाडौं। १२ बैशाख २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नौ तले धरहरा पुनर्निर्माणअन्तर्गत अहिले सुन्धारामा २२ तलाको नयाँ धरहरा बनिरहेको छ। २० असोज २०७५ बाट पुनर्निर्माण शुरू गरिएको धरहराको पहिलो तला ढलानको काम स’म्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिक...
November 15, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on सार्वजनिक यातायातका साधनमा ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ को लोगो टाँसिने
काठमाढाै । देशभरका सार्वजनिक यातयातका साधानमा नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० अभियानको लोगो राखिने भएको छ । भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारीरुपमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्...
November 8, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on अलैंचीको अध्ययन गर्न नेपाली टोली भुटानमा
झापा। नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको टोली ‘तोदे’ जातको अलैंची अध्ययन अवलोकन गर्न भुटान प्रस्थान गरेको छ । नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ काभ्रेको संयोजनमा टोली बिहीबार भुटान गएको हो । टोलीमा नेपाली अलैंची व्यवसायी महासंघ बिर्तामोडका कार्यलय प्रमुख अनिल...
November 6, 2019 November 6, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on आयल निगम चार वर्षदेखि निरन्तर नाफामा
नेपाल आयल निगममा सरकारको सेयर लगानी ११ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । निगममा सरकारी निकायले ०२७ सालमा २९ करोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको थियो । पछिल्लो चार आर्थिक वर्ष निगमले १४ अर्ब ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गर्...